Superb muLinux inoonekwa zvakare neWindows 7 | Linux Vakapindwa muropa
Kuzvikudza muLinux zvakaratidzwa zvakare. Panguva ino chikonzero chaive el kupera kweWindows 7 rutsigiro. Asi, inoratidza mukurapa kwevashandisi vatsva uye kusahadzika kwavo. Kana, mukushandiswa kwemazwi akaita saHasefroch kana Winbug $.
Zvese zvitsiviso zvekutsiva zveWindows 7 zvandakaverenga zvinowirirana pane chimwe chinhu. Unofanira inokurudzira kugovera kuri nyore. Ivo vanobva kuWindows havadi chimwe chinhu chitsva kubvira vanogona chete kushandisa chimwe chinhu chakafanana nezvavanoziva. Uye iwe haufanire kuvaudza chero chinhu nezve iyo terminal.
Ngatisabvunze zvavanoda futi. Ngatiregei kuisa ma distros atisingade. U.S isu tinoziva zvirinani kupfuura ivo zvavanoda.
Vane rombo rakanaka kuva nesu.
Vazhinji vachange vachifamba kuenda kuWindows 10. Kana, ivo vacharamba vachienda kuWindows 7.
1 Kuzvikudza muLinux uye izvo zvatinofanira kuchinja
1.1 Zvinodiwa nemushandisi
Kuzvikudza muLinux uye izvo zvatinofanira kuchinja
Iyo Royal Spanish Academy yakajeka:
1. f. Kuzvikudza uye kusagadzikana chishuwo kusarudzwa kune vamwe.
2. f. Kugutsikana nekuzvitutumadza panguva yekufungisisa hembe dzako nekuzvidza vamwe.
Vashandisi veLinux kazhinji kuzvirumbidza nerusununguko rwemahara rwemahara software. Kuti vazhinji vedu hatigone kuverenga kodhi uye izvo zvainoita kune mana ekushongedza rusununguko hazvina basa. Vamwe vanozvitenda vepamusoro nekuti usashandise graphic installers kana vamwe vafambisi. Ivo vanosiya kunze kwekuti ivo vari kungotevera dzidziso. Unovaburitsa vorasika.
La kunetseka kukuru kubva kumusiki weLinux vhiki ino Izvo zvaive zvisina kufanana kurerutsa shanduko yevashandisi veWindows 7. Akanga achivaraidza zvikuru achipokana pamusoro pevashoma faira system.
Pakati penharaunda dzinotarisira zvirongwa zvekuvhura, isu taibva kuGuatemala (Kufanirwa nedemocracy ne programmers semhedzisiro madzimambos) kuGuatepeor (Udzvanyiriri hwechokwadi hwezvematongerwo enyika uko eZvakanyanya kukosha kuve kubva kune vashoma pane mipiro yaunoita)
Ngatitarisei pa lkunyora mapurojekiti yeLinux Foundation. Zvese zvakanangana nemaitiro makuru eiyo indasitiri.ku. Hapana chakanangwa nekugadzira iyo inotevera Facebook kana iPhone.
Isu tiri Linux, isu takavakirwa paGPL uye isu tinoteerera nerusununguko rwe4 rweMahara Software. Ndiani ane hanya kana kadhi revhidhiyo richimhanya nehafu yekukwanisa kushaya mutyairi ane hunhu? Nei vasiri kutishandisa?
Havatishandise nekuti hatizive kuti ndivanaani uye zvavanoda zvedu.
Microsoft yakazviona ivo programmers vaida kushandisa Python uye kwete Visual Basic. kuti Silverlight haigone kutsiva Flash, asi HTML5 uye mugore vatengi vakasarudza yakavhurika sosi mhinduro. Iyo kambani yakakosha zvakanyanya pamusika wemasheya pane payaive padyo-monopoly.
Nezuro chete, Ndira 17, sosi yakavhurika yakaonekwa ne imwe nzira yemakwikwi kuenda kuHofisi 365 uye Google Docs. Ndezve Nextcloud Hub, iyo yega-inomiririra chikuva iyo inobvumidza yekudyidzana gwaro kugadzirisa, kalendari manejimendi uye foto manejimendi ne geolocation.
Tichiri kuramba tichisunungura maforogo uye mamwe maforogo kubva kugoverwa kwePC, Microsoft iri kuyedza yavo desktop desktop inoshanda mugore. Parizvino inongowanikwa chete kune yemakambani nharaunda, asi hazvizotora nguva yakareba kuti iwedzere kune vakajairika vashandisi.
Uye, hazvichadiwe kutenga rezinesi kuti uve neWindows 10. Iyo Insider Preview chirongwa chinokutendera kuti ushandise mahara (ndanga ndichichiita kwemakore uye kunyangwe iri iri tekinoroji isina kugadzikana vhezheni ini handina kumbove nematambudziko). Kana iwe unogona kubhadhara pamwedzi mubhadharo weW10 uye Hofisi 365 pasina kumbonetseka nezvekuvandudzwa. Iyo sisitimu inotarisira zvese.
Mazuva mashoma apfuura pasocial network ini ndakabvunza mubvunzo wekusiyana:Ndeipi distro iwe yaungakurudzira kudzora vashandisi kure neWindows 7? Kusiya avo vasina kunzwisisa mubvunzo uye kufungira zvisizvo, ivo vakunda vaive Arch Linux, Gentoo uye Linux Kubva kuKutanga. Kugoverwa kwese kuisirwa uko kuiswa kunoda iyo kushandiswa kwakanyanya kwetambo yekuraira.
Asi ini ndoziva Vashandisi veWindows vanoshandisa tambo yekuraira nguva dzese. Saizvozvo. PowerShell, MIcrosoft yekuraira turu chishandiso ine Linux vhezheni uye inogona kuiswa seyenyore package. Kune rimwe divi uko Vashandisi veLinux vanoda kungodzvanya mabhatani uye kuita kuti system itore zvese. Kugoverwa kwakadai seLinux Mint kana Manjaro kwakaitirwa ivo.
Pamwe, kana tikaisa parutivi rusaruro uye tofunga kusiya shongwe yenyanga dzenzou, Ngatizviitei iro gore reLinux kumwe kunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Superb muLinux inoonekwa zvakare kuitira kutsigira Windows 7
Iko kudada ndekwekuti Windows yekuvandudza inotora mafaera evashandisi pamberi payo uye yakaderedzwa nekuti ine "chete" yakabata 3% yevashandisi vayo.
Dai ndainyorera yeWindows Addict ndingadai ndakataura nezvazvo. Uye nezvekuti sei kana rutsigiro rwemutauro rwange rwatakurwa ivo vakakurudzira kuti isu teedzera uye tinamate ñ uye mavhawero akasimbiswa
Zvingave zvakangwara kushandura zita pablog kuita maWindows akapindwa muropa, ini ndagara ndaona tsika yekufarira maWindows nekutyisidzira vashandisi veLinux nemavhairasi ayo, kusiyana neWindows, anoda kuti mamwe mvumo apihwe kuurayiwa kwavo.
Hazvishamise kuti blog inotsigirwa nekushambadzira inofarira avo vanoichengeta. Ndakagara ndakarasikirwa nekuvimbika kuzvinyorwa zvako, dai zvaive nekuda kwekushatirwa kweshamwari pazita rakadai, ndingadai ndisina kunetseka kuti ndiriverenge.
Ini ndinovimba zvechokwadi kuti vanonyatso shandura zita reblog, inguva yekutendeseka. Ndinoziva kuti Windows blogging niche yakazara uye vamwe vanosarudza kushandisa Linux kuzviisa pachezvayo, asi iko kusaremekedza chaiko kune mablog anonyatso shingairira kusimudzira uye kutsigira Mahara Software.
NYAYA YAKANAKA. kunyangwe linus tourval inoti "Ndinoshuva dai taingova nedhesiki rimwe chete!"
Ivo vanofanirwa kumisa zviuru zana zvemazana distros izvo zvinoshandurwa zvehunhu chete izvo zvinoshandura bhurawuza uye theme.
Uye paizove nekuwedzera pfungwa yekuvandudza uye kubatana linux kwaiuya kumberi pasina kuzengurira sezvo paine mikana yakawanda…. Asi pahafu yekumhanya ...
Ch1nga Tu C0l4 akadaro
asi izvo zvisina maturo, akarurama, chikonzero nei linux kana GNU / Linux (kana iwe uri purist) isiri kusvika kune simba rayo izere nekuti zvirokwazvo kana uchitaura nezveLunux kune avo vanobva win7, "mahara maBhaibheri anokurudzirwa" Ndeapi zvinoshanda kune dzimwe nyika se "Ultra chaiko" inofanirwa kupa pekutanga mushandisi uye isinganzwe sepamusoro nekuti ivo vanoziva kushandisa "raira mitsara" ndosaka paine 3% musika chipingamupinyi, izvo zvinoita kuti ndifarire iyo " kuvhura "kodhi ndeyekuti sarudzo yekushandisa kodhi yekodhi" ndeyangu "uye kwete iya yemafuta uye yakasviba programmer (kazhinji, kwete vese saka kana uchinzwa kana kunzwa kugumburwa imhaka yekuti vari). Ari kutaura zvandiri ndinofanira uye izvo zvandisingafanire kushandisa kuramba ndiri mutsetse wetsika
Zvakanaka, ndakatora chinyorwa chose, ndikachishandurira muChirungu ndikapedza maawa makumi maviri nemana ndichichiisa kwese kwese, chakanangana neLinux hongu, zvinoita sekunge kwandiri kuti nyika zhinji dzinofanira kuiverenga, pfungwa dzakadai dzinogona kubatsira kushandura mafungiro zvishoma muLinux, Asi zvingave zvakashamisa kutenda kuti chinyorwa senge ichi posvo pano chete, chinobatsira zvakanyanya, kuti kana, yekupedzisira ndima nhatu ndakachengeta, kunyangwe chiri chokwadi kuti kune vashandisi muWindows vanoshandisa iyo terminal, pachangu semuenzaniso, iwo mazhinji haashandisi uye ndinobvumirana zvakanyanya nekusakurudzira Arch Linux, Gentoo uye Linux Kubva kuKutanga, seyekupinda-chikamu chekumisikidza kune nyika yeLinux, kana ichiwedzera quota yemushandisi ndizvo zvatiri kunyora nezvazvo. , kana vashandisi vambotaurwa Mushure mekuyedza Linux ivo vanofarira zvishoma pasi rino, ivo vanozoona zvese zvine chekuita nekuparadzaniswa voga uye munguva pfupi uye ivo vachatosarudza kana vachida kana vachida kuchinjira kune imwe.
Pindura kuna JustMe
Ini ndinobvuma, kutanga kune zvekutanga, ipapo chero munhu anofarira kuenda zvakadzama nekuti iye anoda "makanika uye kwete kungotyaira chete" anozogona kuzviita.
Zvese muhupenyu zvinotanga nezvakakosha. Zvakajairika ndezvekuti mumwe munhu ari muchirongwa chekuisa fananidzo anotanga kudzidza OOP, chinhu chakajairika ndechezvakadzika, uye chinhu chimwe chete nezve iyo SO
Tarisa, mwana, iwe unoisa yekutanga yemahara base system uye iyo system pachayo inoita kuti iwe usarudze pakati pekuisa zvimwe zvese zvemahara zvinongedzo kana kugona kuisa izvo zvine chekuita nezvezvinhu zvaunoda. Aya ndiwo mashandiro ainoita pane zvese GNU / linux distros.
Chinyorwa hachina kwekutora. Icho chikomana chidiki chinoshungurudza, kubva kune Win7 mushandisi anoona system yake yasiyiwa. Zvakanaka, pomera Microsoft uye ugoenda win10. Kana sarudza linux distro.
Chinyorwa chine lousy, chizere nemafungiro asiri iwo.
Pindura kuna Grog
William Roche akadaro
Iwe unonyatsoshandisa linux panguva ino? Iko hakuna mifananidzo inoenda ku50% sekutaura kwako, mumigove seUbuntu (pane mashoma akati "izvozvi windows 7 haina rutsigiro, unogona kuuya") Mifananidzo yese inoenda sezviri mumawindows, uye zvimwe kana iri yekare Hardware inoenda pamahwindo 7.
Iwe unoshoropodza kudzivirirwa kwenzvimbo yemahara yesoftware yekudzivirira rusununguko rwavo, izvo zvisina basa kune akajairika mushandisi nekuti havagone kuzvishandisa zvinoenderana newe, zvakanaka uchisiya parutivi kuti mumwe chete ndiye anogona kungoshandiswa semuprogramu (wakanyatso verenga ?), parutivi iwe unobatanidza izvi kune iyo linux hwaro kuti hapana chekuita, ndiani anotarisira kudzivirira rusununguko rwemahara software ndeye FSF, iyo linux hwaro hwakagadzirwa chete uye chete kudzivirira zvido zve linux muindasitiri, apa kana tinya kana pfupi.
Ndiani anga achitungamira mukugadzira nharaunda dzinowanikwa kune vanhu vasingazive nezvemakomputa? canonica, nharaunda yemanjaro, mindi, yea zorinOS, zvakare programmers dzeGTK, QT, idzo dzegnome, kde, mate nevamwe vazhinji, dzausingataure muchinyorwa chose uye kuti server yakabvumidzwa kutanga kushandisa linux muna 2012 ndisingatombozivi kuti chii chinogumira kana kupatsanuka kusvika makore apfuura. Muchidimbu, unoshoropodza zvinhu zvisina kana basa nazvo.
Chii chinonzi arch, gentoo uye linux kubva pakutanga chinokurudzirwa kune avo vanobva kumahwindo 7, unoiwana kupi? Ini ndinodzokorora kuti iwo chete makambani / nharaunda dzakagadzira "kuzivisa" (uye kwete zvakajeka) kune Windows 7 vashandisi vanga vari ekushandisa nyore kushandisa.
Ichokwadi ndechekuti urikufumura kumeso kwenharaunda isipo, ini handinzwisise kushoropodzwa kwenzanga uko kusiri padandemutande, zvirinani mumaforamu ehurumende kana teregiramu, dai iwe waiziva iyo arch kana gentoo nharaunda. haungataure zvisina maturo sevashandisi vavo kukurudzira izvi kugoverwa kune vanhu vatsva, uye linux kubva pakutanga? WTF? Hapana munhu anoshandisa izvo muzuva ravo zuva nezuva, kungodzidza kana kutanga mapurojekiti, kwete kuishandisa kumba. Chii chakudaidza kuti unyore izvi? Iwe unovenga GNU / Linux nenharaunda yayo here?
Pindura Guillermo Roche
Ini ndakazoziva Linux seimwe nzira yeWindows (kutsemuka, mavairasi, madhiraivha) uye ini ndakagara neGPL; vimbiso yekuti ini ndanga ndisiri kuzotambisa nguva yangu kuti ndinopedzisira ndave mune imwe Guatepeor. Ini ndinofunga vanhu vanoona Linux sechitendero kana ivo vari vemahara, zvinova ndizvo zvavanotengesa.
Ubuntu Peronist akadaro
Anodiwa Diego German Gonzalez anobva kuTodos Los Santos neAcevedo, avo imi vane kuzvitutumadza nekurega ... ndimi munoburitsa idzi mhando dzenyaya, idzo dzenyu, nekuti hamugone kutsanangurwa neimwe nzira, munofanira kuzvipira kune chimwe chinhu chidiki, kutamba Fortnite, Pokemon, nezvimwe, unoziva, izvo zvidiki zvinhu zvauri kugona.
Sezvavanokuudza iwe pamusoro, iyo blog inofanirwa kunzi WindowsAdictosYTontos.
Leonel Ivan Saafigueroa akadaro
Vashandisi veGNU-Linux, isu hatisi rutsigiro rwemahara rwevatengi veMicrosoft ...
Pindura kuna Leonel Iván Saafigueroa
Zvakanaka, kernel yeiyo inoshanda system haina kudada, kudada kunobva kune vamwe vashandisi vayo.
Muboka rangu re facebook re <> dai tikabvunza avo vachangopindawo kana kufarira kujoina, chii chaunoda kubva kuhurongwa hwekushandisa kuti uzive kana kukurudzira kutama kana kwete
Semuenzaniso, kana chauri kuda kutamba ese katatu maVhidhiyo emitambo pamusika, kuraira kwangu kunogara kuri kwekuti vagare nani paWindows 7, kudzamara vakwanisa kubva Windows 10 zvine hunhu zvakakwana, Zvino kana pane zvinopesana iwe uri anofarira Retros uye / kana maIndies mavhidhiyo emavhidhiyo, saka kana ndikakurudzira kutamira kuLiuxux kana iwe usatomboda kuvhura iyo terminal ipapo ini ndichagara ndichikurudzira kutanga neOpenSuSE Leap 42.3 sezvo paine zvakawanda zvinyorwa zveiyi vhezheni.
Asi zvinoenderanawo zvakanyanya nemidziyo iri padanho rehardware rinotsanangurwa nemushandisi uye nezvavanoda kushandisa sisitimu yekushandisa uye neruzivo rwakadii, uye ivo vanoti kana vachinyatsoda kutama, nekuti bvisa tsika ayo akawanda akachinjika uye kuti akagadziriswa sei kune izvo, ndizvo zvakanaka, hazvireve kuti Liñux yakaipa yekushandisa system. Asi kana isu hatigone kuramba kuti kune mhando dzakasiyana dzemhando yepamusoro dzisingagone kuita zana muzana muLiñux.
Kuti chimwe chinhu chine rezinesi reGPL hazvireve kuti chiri <> sezvo idzo dze <> dzinogona kunge dzichishandisa rezinesi iyi asi gumi dzayo dzakanangana nemapoinzi mana eFree Software inoita kuti Mahara Software ishaike zvakanyanya nekuti iwo mirawo yavanokonzeresa. kupokana kuda rusununguko, zvinongokonzeresa zvakawandisa uye ndosaka vazhinji vanogadzira vachisarudza kushandisa <> panzvimbo ye <>. Paive paine makesi senge Asesprite kana GzDoom anga aine marezinesi eGPL asi aine zvivakwa, mune yeGzDoom FMod EX. Ndiyo chete yandinorangarira, asi nekufamba kwenguva nharaunda yakanyunyuta nezvayo sezvo izvi zvakadzora kuenderana nemamwe masisitimu akadai seFreeBSD.
<>: Izvo zviri nyore sekunge mushandisi anongoda uye anoda kumisikidza anoshanda sisitimu, akatsiga, nekukurumidza, aine nharaunda izere seKDE Plasma 5 (KDE izita reboka rekuvandudza), uye wobva wangovhura komputa yavo, uye tanga kuishandisa, uye kuti izvo zvekuvandudzwa hazvimise system.
Ini ndinotaura izvi nekuti nezuro ndakagadzirisa imwe yemhando dzakasiyana dzeLiñux distros dzandakaisa, Slackware64 14.2, uye ini handizive kuti nderipi moron ravakasiya vachiraira, asi kana uchigadzirisa kuLinux 4.4.208 iyo keyboard, mbeva, network kubatana uye mutyairi nvidia proprietary, vakarega kushanda.
Ndeipi distro yaungakurudzira kune mumwe munhu anotama kubva paWindows 7>
OpenSuSE Leap 42.3 kana Slackware 14.2 kana iwe uchida chimwe chinhu chakatsiga kana Slackware-yazvino kana uchida zvigadziriso kazhinji.
OpenSuSE kubvira pakati pe-90's yakagara yakatarisana nekuva mhinduro yakapusa kumushandisi wekupedzisira, uye ndizvo zvakaita Madrake. Ini handikurudzire kune mumwe munhu zvinhu zvitsva seDebian, Ubuntu, LinuxMint, ZorinOS, ChaletOS, Deepin, KDE Neon, zvakati wandei zvinhu zvakaita seLinux Kubva kuKutanga, Muroyi Linux.
Nekuti kana munhu iyeye asina ruzivo rwakakwana rwehunyanzvi uye nzwisiso yezvaari kuita, haazonzwisise chero chinhu, muma distros seaya anotungamirwa vashandisi vepakati [Debian, Ubuntu, Manjaro, ZorinOS, ChlaetOS, Gentoo] nevashandisi vemberi [ArchLinux , Linux Kubva Kukanda, Muroyi Linux]
Saka mhinduro yako kumagumo ekutsigirwa kweWin7 ndeye, kuvhuraSUSE 42.3, iyo isingatsigirwe?
Pfungwa yechinyorwa ichi inonakidza, asi paunoverenga zvimwe uchaona marashiro aunoita hari nezvinhu zvakawanda zvaunonyora izvo zvingangove hafu yezvokwadi kana zvinoita kunge zvinokanganisa wega nezvinoitika mu gnu / linux.
Ini ndinozviona sezvisingabatsiri kuongorora mairi kana meseji dzapfuura dzaita mushe.
Chokwadi ndechekuti semushandisi we gnu / linux uye mune yangu ruzivo kubatsira vamwe kuti vasvetuke, ini handibvumirani zvachose nekuzvitutumadza kwaunotaura. Ini ndiri wezano rekuti vanhu vanofanirwa kubva kubva kushoma kuenda kune zvimwe, uye mupfungwa iyoyo Ubuntu uye zvigadzirwa zvichataridzika sedzakanaka sarudzo (asi kwete izvo chete) kune vanhu vazhinji, kunyanya avo vakaroora kune zvinoonekwa pfungwa zveWindows uye iye ari vasingadi kudzidza chero chinhu, pane distros senge Mint kana ZorinOS inobatsira kwazvo.
Nezve izvo zvaunotaura kuti kune vashandisi vanoda kuzvimisikidza pakutsikirira mabhatani uye kuti kwavari kune Mint kana Manjaro, ini ndinopesana nepfungwa iyoyo. Dzimwe nguva mumwe haana nguva yekukakavara uye kurwa nevatongi uye kusimudza shit nehafu izvo zvinotora kuita zvakamirira, uye distro ine yakanaka kwazvo rutsigiro rwehardware seMint inogona kukuchengetedza nguva yausingafanire spare uye for Ndizvozvo.
Izvo hazvindinetse ini kuti kune ma distros akadai, kana mamwe akaita sa gentoo (mumashoko eshamwari, zviri nyore zvekuti chero munhu anogona kuiverenga anogona kuiisa), slackware kana arch, uye kana paine vamwe vakaita seElementary, Ubuntu, Manjaro, Mint, nezvimwe.
Kana ini handifunge kuti forogo yakawanda yakaipa pachayo uye hauzive rese basa nekusimudzira kwezvikwata zvakawanda zvakagadzira graphical interfaces zvakanyatsogadzikana, zvine hungwaru, zvinobatsira uye zvakagadzikana, zvishoma zvishoma pane iripo muWindows kubvira vhezheni yayo 95 .
Mazuva mashoma apfuura, ini ndakaisa Linux Lite pane laptop yemukadzi. Icho chikonzero, chiri nyore kwazvo, yaive yekare laptop iyo yaivhara zvese zvaaida, internet, mimhanzi, uye nezvimwe zvishoma. Uye zvese zvakangoerekana zvave kunze kwekutsigirwa, pamwe nezvimisikidzo zvinokurudzira kutamira kuWin10. Kwayedza, ine 32bit vhezheni. Win zvachose akaramba kushanda neiyo wifi kadhi kana nean. Pakanga pasina nzira yekubvuma, kunyangwe ndakaedza kushandisa vatyairi vangani.
Ndakaedza maLTS marefu anogara kwenguva refu, nekuti panguva iyo yandakamuudza kuti nekukurumidza kana kuti gare gare aifanira kuchinja makomputa. Ndakaedza Lubuntu, Debian, Tumbleweed, ese akatadza kudivi rekufananidzira, yekare Nvidia GeForce Go 7300. Kana Debian haapi rutsigiro futi, uye Nouveau, isu tatoziva, haishande. Zvinhu sezvazviri.
Kana ikozvino, nekurega basa kweWin7, isu tinokwanisa kutaura kuti yakanyanya kunaka sarudzo ye newbie ndiArch, kana Debian, kana Linux kubva pakutanga, isu tinopenga.
Kuzvikudza kuripo, pasina kupokana. Asi ndeye kuve neisingasviki hafu yemunwe pahuma kana ndikaraira mumwe munhu novice kana asingazive chero chinhu nezveLinux, iwo distros.
Sezvineiwo, tanga neiyo ine hushamwari sezvinobvira, uye kukurudzira kutsvaga, kuyedza, iyo bug iyo inokukurudzira kuti ude kuziva zvakawanda.
Ndanga ndichishandisa Linux kweanopfuura makore gumi nemashanu, ndakarega kushandisa Win anopfuura makore gumi apfuura, ndakaedza mizhinji yedistros, ndinozvidzivirira neakawanda acho. Kana vakandiisa pamberi peDebian kana zvigadzirwa, Arch, Fedora, kana Opensuse, ini ndoziva maitiro ekugadzirisa mirairo yavo uye misiyano yavo.
Asi izvo zvinowanikwa nekufamba kwenguva. Uye mushandisi mutsva anofanirwa kupihwa izvo: time. Uye kukudzidzisa iwe kuti Linux inoda zvishoma kuyedza pane yako chikamu. Izvo zvakafanana nekudzidza izvo izvo nharembozha nyowani inogona kupa. Pakutanga zvinoda, isu takashandiswawo kune yedu yekare nhare, asi isu tine base, uye yakafanana kune wese munhu.
Pano izvo zvinoendawo. Haazoziva kuraira, asi anoziva kushandisa mbeva, keyboard, processor, kusevha internet, uye Google. Zvimwe zvacho zvinoenda zvishoma nezvishoma.
«Uye, hazvichadiwe kutenga rezinesi kuti uve neWindows 10. Iyo Insider Preview chirongwa chinokutendera kuti ushandise mahara (ndanga ndichichiita kwemakore uye kunyangwe iri iri tekinoroji isina kugadzikana vhezheni ini handina kumbove nematambudziko). Kana iwe unogona kubhadhara pamwedzi mubhadharo weW10 uye Hofisi 365 pasina kumbonetseka nezvekuvandudzwa. Sisitimu inochengeta zvese. "
Kana iwe uchifara kwazvo nema windows, chii iwe unouya kuzoti shit kupokana neGNU / Linux nevashandisi vayo? Linux haina kunaka. Zvinhu zvinoshaya hunhu hwevanhu. Chero zvazvingaitika, vamwe vashandisi vayo vanove vakanyanya. Vaya vashandisi vanozvibata zvakafanana newe. Iwe waingofanirwa kuti: «uye zvakare iri sisitimu isingashandiswe nemunhu uye blah, blah, blah ...»
50 muzana makadhi? … Handizive, Rick, zvinoita kunge zvemanyepo…
Zvekare kutsika… .munhu wese achitsvaga hupenyu hwake.
Varegei vaite zvatakaita isu tese, kuyedza kudzamara tawana izvo zvatinonzwa kugadzikana nazvo.
Ndiro dambudziko revazhinji, rekuda kushandura nyika ... kuti rimwe nerimwe rishanduke
uye nyika ichashanduka.
Ini ndapinda munzvimbo ino kuti ndiverenge muchiSpanish nezveLinux. Mushure mekuverenga ichi chinyorwa, ivo vari zvachose kunze kwangu kwakawanda.
Pfungwa yekuona yemahara software ndeyekuti munhu wese anoita sarudzo. Kana iwe uchida kuenderera neW7 zvakanaka, simudzira kune W10 zvakanaka uye kana iwe uchida kuchinjira kuLinux sarudza iyo distro yaunofarira zvakanyanya, maererano nekushandisa kwayo. Iyo nhanho yekushandiswa kweLinux zvakare yako sarudzo. Kana paine kudada kana kuzvikudza mune izvi, ini handizive
Handina kumbobvira ndaverenga chinyorwa chakashata pane saiti yakaita seiyi ... kunze kwenyaya yacho inotaridzika kunge yekunyepedzera uye kupusa, ndinofunga kuti kana mumwe munhu akakurudzira Arch kune "newbie" (yandinopokana zvakanyanya) yaizofanirwa kunge iri troll ( ndiani aripo pamativi ese maviri) kana mumwe "newbie" uyo asingazive zvaari kutaura nezvazvo.
Iwe unofanirwa kutarisa rondedzero yangu yezvinyorwa. Ndanyora zvakaipisisa. Ehezve, uve nekuwedzera kunzwisisa kwekuverenga. Kurudziro yaArch ndima inoverengwa seinotevera
«Mazuva mashoma apfuura pasocial network ini ndakabvunza iyo inverse mubvunzo, ndeipi distro yaungakurudzira iwe alejar Windows 7 vashandisi? Kurega padivi avo vaisanzwisisa mubvunzo uye rusaruro, vakahwina vaive Arch Linux, Gentoo uye Linux Kubva kuKutanga. Kugoverwa kwese kuisirwa uko kunoda kushandiswa kwakasimba kwetambo yekuraira. »
Izwi reruzhinji rwechinyorwa harifadzi kwandiri seGNU / linux mushandisi. Iwe une maonero akasarudzika ezvinonzi "nharaunda" yevashandisi veLinux (kana paine chinhu chakazvimiririra chinogona kunzi icho).
Iwe unotaridzika zvakanyanya kunge wakakuvara Windows 7 mushandisi nekuti iwe unofanirwa kusiya iyo system yawakashandisa kwenguva yakareba. Zvakanaka, mukomana, ndine hurombo, enda unochema kuMicrosoft kuti vakudhonze uye enda unochengetera kukwidziridzwa kuWindows 10, zvinova ndizvo zvinokurova zvinoenderana nezvaunonyora.
Uye siya vashandisi veWindows vanoda kuenda kuLinux chete. Uye kuraira vashandisi ve linux sezvavanofarira kune windows vashandisi.
Mhoroi, pachokwadi pane kugoverwa kwemalinux mazana masere kana kudarika?
Ini ndaive naFedora akaisirwa neiyo KDE desktop asi ini ndaive nezvinetso nemifananidzo (AMD) uye pandakawana iyo yandakatenga, ndakaisa Kubuntu. Kunze kwemirairo yekuvandudza, kuisa kana kudzima chirongwa ini handioni chero mutsauko kana unenge usiri mutsauko.
Ini ndinobva mukutarisa kugoogle uye mugove wemusika weLinux uri 2%. Ini ndinofunga kuti dai paive nekushomeka kushoma uye ivo vakatarisa zvakanyanya kune vatyairi zvaive zvakakwana Ndanga ndichishandisa linux uye windows kwemakore mazhinji. Dambudziko randinogara ndiinux linux giraidhi mutyairi, haana kumbobvira muWindows. Ndinovaraidzwa kwazvo neuyo anoti windows windows inoita kuti iwe urasike mafaera, ini mukuzvininipisa kwese ndinokuraira kuti uchengete Windows yako kana ukaishandisa. Ini ndinoitarisira zvakanaka nekuisa chete izvo zvandinoda nekuti ini ndaive nemamwe matambudziko mazhinji neyakagadziriswa neLinux pane neWindows.
Kwaziso uye ikozvino unogona kupfura